Chrome Kitchen iberibe foset Na Wepụ-Out Sprayer
Ihe eji esi nri, ihe eji asa ite, ebe a na-asa mposi | WOWOW
Oghere Ntucha Bar
Ihe eji asa mmiri
Home / Faucets kichin / Wetuo mmiri / WOWOW Chrome Kitchen Sink Foset Na Pull-Out Sprayer
gosiri 4.95 nke 5 dabeere na 37 ahịa Fim
(37 ahịa reviews)
Zụta kichin Faucet Single Handle nwere arụ ọrụ nkwụghachi akpaka. A na - enweta ihe ana - akpọghachi azụ mmiri ma ọ bụ mgbịrịsọ ike).
Ntụziaka nwụnye 2310800C
Wetuo igwekota igwekota igwe mmiri 2310800C
Na-achọ chrome klaasị adapu kichin igwekota igwe nri? Choo ozo! WOWOW na-enye gị otu kachasị mma oge gboo ma gbadata igwekota igwe nri igwe ị ga-ahụ n'ahịa. Achọpụtaghị uru ọ bara maka ego adịghị mma, dịka WOWOW maara otu esi eme igwekota igwe nri klọọkụ dị ọnụ ala. E wezụga nke ahụ, okike ya pụrụ iche na-eme ka WOWOW na-agbada igwekota igwekota igwe na-eme ihe na-adọrọ adọrọ na kichin ọ bụla. Mgbe ịhọtara maka imewe kichin oge gboo, ma ọ bụ imewe kichin ọgbara ọhụrụ, mgbata igwe na-agwakọta kichin ga-adaba na ya.
Oge ọ bụla ndị na-ese WOWOW jikwaa imewe igwe ihe igwekota igwe nri na-eju ọtụtụ mmadụ anya. WOWOW chọrọ naanị imepụta igwe ihe igwe ihe na-ejide anya na-eme mgbanwe na kichin ọ bụla. Peoplefọdụ ndị na-eleda mmetụta nke igwe ihe na-agwakọta kichin, ebe ha na-enwe nnukwu mgbanwe na kichin ọ bụla. Igwe igwekota na kichin nwere ike itinye mmetụ pụrụ iche na kichin ọ bụla. Ndị na-emepụta WOWOW maara nke a nke ọma. Ọ bụghị n’efu ka a na-adọkpụ igwekota igwekota igwe nri nke WOWOW bụ ndị ahịa si n’ụwa niile.
Baa Uru wụsa igwekota igwe nri igwe mmiri
Mgbanye igwekota igwe nri nke WOWOW na-egosipụta uru dị na nsị mmiri nwere ike ịdọrọ ngwa ngwa igwekota igwe nri. Nke a n'ozuzu na-eme ka ebe ị na-agbatị site na 15 inch ruo 23 na inch. Enwere ike ịdọrọ mkpọda mmiri a na-agagharị agagharị ngwa ngwa, iji mee ka ebe ị na-asa ahụ nke ọma. Ọ bụla akụkụ nke ebe ị na-asa kichin, na mbụ siri ike iru ya site na nhicha ụlọ kichin igwe nri gị, ugbu a nwere ike ịsacha ya mfe. Enwere ike ịdọrọ nsị mmiri ahụ ngwa ngwa ma ejiri ya, ọ ga-alaghachi na akpaghị aka n'ọnọdụ mbụ ya.
Akụkụ ọzọ dị mma nke ime mmiri igwekota igwe nri nke WOWOW bụ mgbata swivel nke nwere ike ịkwaga ogo 360. Nke a na-eme ọdu mmiri igwekota igwe kichin a kachasị mma maka ebe a na-asa kichin abụọ. N'ụzọ dị otu a, ọ dị mfe ịgbanwe site n'otu ebe a na-esi na kichin gaa na nke ọzọ. Ọ dị ka ọ dị mma iji rụọ ọrụ igwe mmịkọ igwe nri ebe a dị ka WOWOW na-eji ihe ndị dị elu na-akụda akwa igwekota igwe nri. Ga-achọpụta ọdịiche ahụ ozugbo mgbe ị na-arụ ọrụ igwekota igwe nri nke WOWOW.
3-mode akwatu igwekota igwekota igwe nri
Mgbanye igwe na-agwakọta igwekota nke WOWOW nwere ike ịrụ ọrụ site na otu lever dị elu. Enwere ike iji mmiri na-ekpo ọkụ na mmiri oyi iji naanị otu aka ruo mgbe ọ ga-enweta ọmarịcha ọnọdụ okpomọkụ. Nke ahụ ga-emetụta oke mmiri. N'ụzọ dị otu a, ị ga --echekwa otu otu aka mgbe niile iji rụọ ọrụ ndị ọzọ. Igwe eji akwa seramiiki na-enweghị mmiri na-emesi arụmọrụ kachasị mma. N'ihi akara ya, onye ekpenta ahụ na - agbagharị ma na - achọpụtakwa oge ọ bụla n'etinyeghị mmiri ọ bụla. Na nke kachasị, ọ na-ekwe nkwa njikwa mmiri ọkụ ọfụma na nke na-enweghị ihe ọ bụla.
WOWOW na-akwada igwekota igwekota igwe nri na-enye igwe ihe igwekota igwe ọrụ atọ. Ewezuga ọnọdụ mmiri ị na-enwe mgbe niile, ịnwere ike ịhọpụta maka ụdị ịgba ma ọ bụ ọnọdụ aqua-blade. Ọnọdụ aqua-agụba na-enye gị ụgbọ mmiri siri ezigbo ike, nke nwere ike isi na ngwa ngwa gbazee nsị nri niile site na efere ma ọ bụ ebe a na-esi esi esi esi esi. Ọrụ a pụrụ iche na ahịa ma bụrụkwa uru dị na ya maka igwe mmado igwe nri igwe nke WOWOW n'elu klọọkụ ndị ọzọ. Nwere ike ịgbanwee mmiri ọfụma na emetụ nke bọtịnụ ahụ, a na-edobe ya n'ụzọ dị mfe na ntanụ nke isi igwekota igwe nri.
Ọdịmma dị elu na-agbada igwekota igwe nri igwe mmiri
Dịka e kwuru na mbụ, WOWOW maara nke ọma mkpa ịdị mma na-adọkpụ igwekota igwekota igwe nri. Ọ bụ ya mere WOWOW ji ihe ndị dị elu nke dị elu karịa nke kachasị elu maka ụlọ ọrụ. Chee echiche banyere usoro electroplating elu dị elu, ihe ndị a ma ama n'ụwa ka Neoperl aerator, yana ihe igwe siri ike. Naanị iji hụ na ị jiri ngwaahịa kacha mma na-arụ ọrụ ogologo oge. Ya mere, WOWOW nwekwara ike ịnye gị akwụkwọ ikike maka afọ 3 maka ndọkpụ igwekota igwe nri ya. Na nke ka nke, na WOWOW anyị ji n'aka na ị ga-alaghachikwute anyị, ebe ọtụtụ ndị ahịa anyị na-anọgide na-abụ ndị ahịa na-eguzosi ike n'ihe maka ndụ n'ihi oke ego anyị na-enye.
Mbughari igwe akwa a na-ewepu akwa dị elu na-akwada igwekota igwekota dị mfe iji wepu ma ọ bụ dochie ya. N'ụzọ dị otu a, ị ga - ehicha ma dozie isi ịgba nke igwe ihe igwekota ihe nfe, ma wepu nsị mmiri niile siri ike n’oge. Igwe WOWOW nke na-akwada mmiri igwekota igwe nri dị mma maka sistemụ nrụgide dị elu. Igwe mmiri silica gel na-agbanwe agbanwe na-emekwa ka ọ na-arụ ọrụ dị mma na ogologo ndụ.
Ingwụnye akwatu igwekota igwe nri igwe
Mgbidi igwekota igwe nri igwe ihe nke WOWOW nwere ike itinye ya na oche kichin 1 ma ọ bụ atọ. A na-ebugote oche a n'okpuru igwe igwekota igwekota igwekota igwe nwere ihe eji eme ya. Ihu igwe eji kpuchie onyunyo n’egosiputa, a na-ekpuchi oghere nile, yabụ n’etinye gi ihe nke etinyere gi nke oma, kporo tuo igwekota igwe nri. Iji nwee ike ịwụnye igwe ihe igwekota igwe nri ndị a na-abịa n'onwe gị, ngwaike niile dị na ngwugwu ahụ. You nwere ike rụchaa wụnye igwe ihe igwekota igwe nri dị ka ikuku. Na vidiyo mgbakọ ị nwere ike ịmecha ngwa ngwa ihe na-erughị nkeji iri atọ. Nke a ga - azọpụta gị igwe plọte dị oke ọnụ!
Na mgbakwunye na oge ikike afọ atọ nke WOWOW na-enye gị mgbe ịzụrụ igwe nri igwekota igwe nri ndị a, WOWOW na-enye gị nkwa 3-ụbọchị-azụ nkwa. Ọ bụrụ na ego ị na-enweta ga-amasị gị ma ọ bụrụ na ịzụta igwe nri igwekota igwe nri ndị a, ị nwere ike iweghachite igwe igwekota igwekota igwe ihe na-enweghị nsogbu. Ga- enweta nkwụghachi zuru ezu n’enweghị ajụjụ ọ bụla.
Uru nke dida ulo igwekota igwe nri igwe na otutu:
Give Nye ihe igwe eji achọ nri
· Omuma ma emebeghi
· 3 ụdị mmiri, gụnyere aqua-agụba dị elu
· Ihe eji eme ezigbo ihe eme
Includ gụnye ngwa ga-eme onwe gị
Ọ dị mfe ihicha ma dị mfe ilekọta
· 3 afọ akwụkwọ ikike
SKU: 2310800C Categories: Faucets kichin, Wetuo mmiri Tags: 1 ikp, Chrome, Gbatuo
Oge a, Oge A
6.89 sentimita asatọ
8.8 sentimita asatọ
Moddị Atọ: Ọnọdụ Sweep / Stream Mode / Spray Mode
Number nke oghere
Nkeji ngwugwu nha
Oghere Ugwu Na-alụ Nanị
A kụrụ ya
Igwekota igwe / Ọrụ nchịkwa mmiri atọ
Igwe eji esi nri kichin; 50cm Na-ekpo ọkụ & Mmiri Mmiri Hoses; Kpochapu ihe ntanye; Efere oche; Arịọnụ Ngwa
Enwere nke a iji dochie obere obere pọmpụ anyị / anyị nwere ihe na-esiri anyị ike ịsa ite nke dị elu / ogologo na ihe niile dị mma .. naanị ihe m gbanwere bụ ntinye maka ọkụ na oyi nke ndabara na-adọta gị. ekpo ọkụ na achọghị m ya coz enwere m ụmụaka ka m wee jikọta sooks na-acha anụnụ anụnụ na valvụ ọkụ na-acha uhie uhie na valvụ oyi .. ihe ọ bụla ọzọ dị mma n'ezie ezigbo ịzụta.
Achọrọ m ịgbanwe ọkpọkọ kichin ochie m, ọnụahịa ahụ dị mma, yabụ azụrụ m na-enweghị oge ọ bụla. Ihe ndọda na ntọala 3 dị egwu! A nnọọ afọ ojuju ndibiat!
Na-ele anya ma na-adị ezigbo mma.
Emechara m ịwụnye ọkpọ mmiri na kichin m. Mfe iji wụnye na ọ dịghị mkpa ịkpọ onye ọkachamara. Ọ dị mfe ịdọrọ ihe nkwụsịtụ ala ma hapụ ya ka ọ banye n'ime aka ahụ. Ọ dabara na njikọ njikọ m bụ otu nha dịka ngalaba a nwere. Maka ọnụahịa ọnụahịa, ọ dị ezigbo mma.
Tụnyere a foset megide nnukwu aha dị ka Morn, Delta, wdg. Obi na-adị na iji tụnyere. Nke a foset dị mfe ịchịkwa mmiri mgbali na okpomọkụ.
Enwere m nnọọ mmasị na ya!
Ọ dị ezigbo mma na ịdị mma dị ka faucets dị oke ọnụ.Ma wụnyere foset a na kichin kichin anyị. Ọ dị mfe ịwụnye ma rụọ ọrụ na-enweghị ntụpọ kemgbe. Ọgwụgwụ dị mfe ọcha, na-eguzogide ọkọ. Ọ nwere ezigbo ihe ndozi na sprayer na-arụ ọrụ nke ọma, enweghị nchapu ma ọ bụ nkwụsị. Igwe mmiri ọhụrụ a na-amasị anyị.
Mgbe m gụsịrị nyocha niile, m kpebiri na anyị ga-anwale ụrọ mmiri a. Maka $ $ $ o yiri ka o kwesiri ohere. Chaị! Obi dị anyị ezigbo ụtọ na ọkpọkọ mmiri a. Ma ekweghị na àgwà maka price. M ga-akwado nke a foset ka onye ọ bụla na-achọ iji nweta nkwalite ma na a mmefu ego ma ọ bụ. Nnukwu uru, anya dị ukwuu. Nnukwu ọrụ.
Akwa ọkpọkọ maka nnukwu ọnụahịa! Azụrụ m ọkpọ ọkpọ maka nna nna m na nso nso a site na nnukwu ụlọ ahịa ngwaike igbe maka ihe dị ka okpukpu abụọ ọnụahịa nke ọkpọ a. M nwere ike maa kwe nkwa na àgwà nke a foset na ala iji wụnye dị mma karịa gara aga onye m zụtara. Ọ na-abịa na ahịrị mmiri - na-edochi edo edo gị mgbe niile !!! Ọzọkwa ibu mgbakwunye bụ mfe iji wụnye. N'ozuzu oke obi ụtọ na ọkpọkọ.
A na-arụzigharị ụlọ m, yabụ achọrọ m ọkpọkọ mmiri a. Na-arụ ọrụ dịka a tụrụ anya ya. Ọ dịghị ihe na-eme mkpesa banyere Ọ bụ ndị dị otú ahụ a dị mfe ngwaahịa ma ọ na-arụ ọrụ dị ukwuu! N’ezie na-ahapụ ohere dị ukwuu na tebụl mgbe m chọrọ ịsa efere ma ọ bụ abụọ ma ọ bụ maka ihe ndị na-abụghị asacha efere.
M ntakịrị obi abụọ na price na eziokwu na ọ bụghị nnukwu aha ika. M mgbe niile ụjọ nke ọnụ ala Plumbing metụtara fixtures na-agbasa, n'ihi na ị ga-eji ọtụtụ puku idozi mmebi na ihe mmezi $ 20 ma ọ bụ $ 30 ngwaahịa nwere ike azoputa. Otú ọ dị, nke a bụ nnukwu ngwaahịa! My ochie American Standard ika foset mebiri na threaded n'olu, si nchara. Igwe agha ahụ ga-anọrịrị na-eri oge ruo oge ụfọdụ, kposara ahụpụkwara m. Emechara m belata ahịrị mmiri ochie ma gbajie pọmpụ ndị ọzọ iji wepụta ya. Nke ahụ bụ ụdị nro, ma nwee olile anya na ọ naghị ese onyinyo ihe m chọrọ ịtachi obi. Ma ọ bụghị. Wụnye nke a na-aga nke ọma ma dịkwa mfe. My sink nwere atọ oghere ntọlite ​​ya mere m ji isi efere. Epeepe m na-amasị m bụ ụfụfụ ụfụfụ karịa nke obere plastik ị na-enweta. Mgbe m na-achọgharị ihe, ị nwere ike ịhụ ụfụfụ na-emechi ihe niile ma pụọ ​​n'anya. Eji m n’aka na nke a agaghị agba nchara dị ka nke m. M na-enwe mmasị na njedebe, ọ naghị akpọsa ya na ọ bụ ntụpọ na-eguzogide ọgwụ mana ọ naghị enweta ebe mmiri ma ọ bụ mkpịsị aka aka. Eleghi anya n'ihi na ọ bụ igwe anaghị ma ọ bụ nickel? Enweghị m n'aka, mana nke ahụ dị mma ịhụ na ihe a na-atụghị anya ya na ọnụahịa a.
Naanị nchegbu m nwere bụ mgbe m wedata spout ịsa efere oghere olulu / sink Flex ntakịrị. Nke a nwere ike ịbụ n'ihi m sink ịbụ a mkpa igwe anaghị nakwa. Adịghị m eme ihe ọjọọ n'ihe m na-echegbu onwe m mana ọ bụ ihe m na-edebe n'azụ uche m mgbe m na-eri nri. (Kpachara anya ma ọ bụrụ.)
Aga m akwado onye ọ bụla! Kedu ihe kpatara iji jiri $ 100… $ 150… $ 200 na foset na nnukwu ụlọ ahịa mgbe ị nwere ike nweta nke a maka obere ego?
Tupu ịzụrụ ngwaahịa a, agụrụ m ọtụtụ nyocha banyere ahụmịhe ọjọọ sitere n'aka ndị ahịa ndị ọzọ wetara ngwaahịa a. Agbanyeghị, ekpebiri m ịnwale ya ma ruo ugbu a (naanị ụbọchị 3 iji ya) ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma na enweghị nsogbu ọ na-apụ apụ.
Aga m ekweta, agbasiri m ike itinye nrụnye ntakịrị, mana nke ahụ abụghị ihe kpatara ngwaahịa a. Ntụziaka ndị ahụ doro anya, naanị m nwere nro na-eme ka arụ ọrụ ochie m niile kwụsị ma wepụ ya. Ozugbo m gafere ihe mgbochi ahụ, nrụnye ọkpọ mmiri ọhụrụ dị mfe.
N'ihe banyere ịrụ ọrụ, nnukwu isi na-agba m nwere nnukwu nrụgide. Otú ọ dị, nrụgide na ntọala "iyi" yiri ka ọ dị ntakịrị. Amaghị m ma ọ bụrụ na nke a bụ nsogbu gbasara ọkpọkọ ma ọ bụ mmiri m. Kedu ụzọ ọ bụla, ọ bụghị nnukwu nchegbu ka m na-ahọrọ idebe ya na mbara igwe ịgba agba ọ bụla.
Ka o sina dị, n'ozuzu m gosiri ngwaahịa a nke ọma n'ihi uru, ntinye dị mfe, na ọmarịcha anya. Ọ bụrụ na enwere m nsogbu ọ bụla n'ọdịnihu, aga m edezi nyocha m iji gosipụta ya na mmelite.
Ọ bụrụ na ị na-agbazite ebe a bụ nnukwu ụzọ iji kwalite site na ọkpọkọ mmiri na-anaghị adịkarị nke na-abịa na mgbazinye. You nwere ike itinye ọkpọkọ mmiri ochie ahụ tupu ị pụọ. Igwe mmiri a dị oke mfe ịbanye, ọ na-ewe oge ọ bụla. Ebe ịsa ahụ anyị nke kichin bịara enweghị sprayer na obere mkpụmkpụ nke nọdụrụ ọdụ na nso nke ime mmiri ahụ ka ọ bụrụgodi na sink ahụ nwere naanị efere ole na ole na ya, o siri ike ịsacha ha. Igwe mmiri a na-agbagọ WAY dị elu na-enye anyị ọtụtụ ọnụ ụlọ, gbakwunyere na ọ nwere sprayer nke kwesịrị ịbụ ọkọlọtọ maka ọkpọkọ / mmiri mmiri niile n'oge a. O doro anya na ọ bụ onye na-agbanwe egwuregwu, na-eme ka nhicha dị mfe, ọ dịkwa mfe ịgbanwe ma ọ bụrụ na anyị apụ na mgbazinye anyị ma chọọ nkwụnye ego anyị.
Zụtara nke a iji bulie ụfọdụ nkwalite na mgbazinye.
Na-emekarị ụdị ụdị ọkpọ a bụ $ 100 + site na homedepot na Lowes n'ihi ya enwere m obi abụọ na nke a ga-abụ ezigbo mma.
Ekwesịrị m ịsị na enwere m obi ụtọ maka ịdị mma maka ego ahụ, ibu ahụ dị ọtụtụ iji weta eriri mmiri ahụ. Twodị abụọ ahụ na-arụ ọrụ dị egwu mana bọtịnụ nkwụsịtụ nwere ụfọdụ mgbagha na ya na m nwere ike ịnụ nrụgide na-akwado. ọkpọkọ mana ezughị na m na-echegbu ya.
Ngwurugwu ígwè dị oke mma na ọnụahịa ego a ma ọ nweghị ihe na-emebi emebi.
Ntinye dị mfe, naanị akụkụ ịma aka bụ kposara na-etinye akara n'okpuru akwa mmiri ahụ. Ọ bụrụ na ị nwere a kwadoro sikruuokwomoto ma ọ bụ fechaa malite ịgba mgbe ahụ, nke a abụghị nke ukwuu nke ihe iseokwu.
N'ozuzu nke a bụ ihe m ga-ndoro anya anya ịzụta ọzọ maka m ọzọ mgbazinye anya isi nke a na-anọchi ule oge!
Zụtara nke abụọ maka akụkụ nke ọzọ, nrụnye dị mfe ma were ihe dịka 30mins nwere ike iji kpuchie eriri ndị ahụ n'okpuru igwe mmiri.
Ebe anyị na-egwu mmiri adịghị omimi nke ukwuu ma achọrọ m ụzọ dị mfe iji jupụta ite. Enwere m mmasị na ọ nwere ntọala 2 - iyi ma gbasa! M arụnyere nke a (na nkwụsị) nke ọma n'okpuru otu awa. Oluchi mkpọchi nwere oghere nke na-enye ya ohere ịga n’ihu n’agaghị edetu ya n’elu hoses. Otu ihe mara mma maka ntinye bụ hose na-acha anụnụ anụnụ na ọbara ọbara, na-eme ka nko na ikuku. Anọ m na-elele ụlọ ahịa igbe maka ụdị ụdị ọkpọ a. Ọnụahịa ndị dị na mpaghara yiri nke ahụ na-eme ka njedebe nke mmefu ego m. Igwe mmiri a nwere njirimara niile m chọrọ ma sie ike nke ọma. Great price, great foset na obi dị m ụtọ na m zụrụ a!
M hụrụ n'anya nke a foset mfe iji wụnye na-arụ ọrụ dị nnọọ mma n'ụzọ zuru oke m kichin kichin sink nnukwu ego ga-n'anya ịzụta ọzọ dị ka onyinye.
Emere fom a ka o were kichin na-adịru nwa oge ka anyị mezie nke anyị. Anyị hụrụ ya n'anya nke ukwuu na anyị ga-eji ya na oghere ọhụrụ. Nnọọ ike, àgwà ewu, ọ dịghị plastic ibe n'ibe. Ogologo oge zuru oke, dị mfe ịwụnye, dị mfe iji, nwee ezigbo mgbanwe site na ihe ịgba mmiri. Na ihe niile maka ọnụọgụ ego nke ụdị "aha", nke a na-ejikarị ọtụtụ plastik eme. Ezigbo ọkpọkọ maka $ $.
M ntakịrị ụjọ na ọ ga-adị ka “ọnụ ala plastic” ma ọ dịghị! M na-eme m kichin m na foset mara mma !!! M hụrụ n'anya na m nwere ike ịgbanwe mmiri mgbali na ọbụna kwusi mmiri eruba mgbe ncha elu efere nke na-azọpụta mmiri na ego na m mmiri ụgwọ. M nwere okpukpu abụọ ka ọ buru ibu ma adaba.
Nke a bụ n'ezie ezigbo ibu ịzụta. Ọ bụ n'ezie mfe wụnye. Akụkụ kachasị sie ike bụ iwepụ ihe ndozi ikpeazụ ebe ọ bụ na ọ dịla agadi ma dị njọ. Mana ihe ndozi a mara mma, dị mfe ijikọ ọnụ, ma eleghị anya ọ were m ihe dị ka ọkara elekere karịa, gụnyere nhicha, iji dochie ihe niile. Enwee obi ụtọ na ịdị mfe nke iji na ike ịgbanwe site na-ekpo ọkụ na oyi, ọrụ ịgba, na ịgbatị. Bọọlụ dị arọ bụ ama. Hụ nkà na ụzụ a n'anya na otu esi achọpụta ihe ọhụrụ anyị na-eme ka ibi ndụ dị mma ma dịkwa ọnụ ala.
Obi dị m ụtọ na unit. Ọgwụgwụ mara mma. Naanị ihe m kwesịrị ikwu bụ bụ aka dị ezigbo nhịahụ ma na onye kwesiri ịkpachara anya mgbe ị na-agbanye ọkpọkọ ka ị nwere ike nweta obere ike karịa ka achọrọ. Ma ọ bụghị ya, ụlọ ọrụ ahụ na-amasị m nke ọma na usoro ndị ha mere na ngwaahịa ha. Ga-azụta ọzọ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
M hụrụ n'anya ọhụrụ m foset! M wụnyere ya n'abalị ụnyaahụ. O siri ike nke ukwuu belụsọ na ị gbakwunye eriri mmiri ahụ. Ọ bụrụ na ị nwere ike, gbakwunye tupu itinye eriri mmiri ahụ. Ihe siiri m ike karịa n'ihi na oghere dị n'okpuru sink m pere mpe. E wezụga nke ahụ, ọ gara nke ọma ma ana m ahụ ọkpọ mmiri ọhụrụ ahụ n'anya!
Obi dị m ezigbo ụtọ na ngwaahịa a. Ọ dị mfe ịwụnye. Anyị nwere obere ụmụaka ma ọ dịrị ha mfe iji, kwa. Anyị gbasoro ndụmọdụ nke onye nyocha ibe anyị ma gbanwee njikọ ọkụ / oyi ka ọkụ wee bụrụ ịlaghachi azụ na oyi iji kwaga n'ihu. Na-arụ ọrụ dị ukwuu na m ga-akwado ngwaahịa a !!
Anọ m na-achọ dochie m ochie foset na kichin ruo nwa oge ugbu a. Ntọala a mara mma ma na-arụ ọrụ nke ọma! Ọ bụ ntakịrị aghụghọ aghụghọ ịwụnye nrụnye (ọkachasị akụkụ mgbe m ga-agbasosie ike na mmiri ahụ - emechara m jụọ mmadụ maka enyemaka), mana m mechara nweta ya na ọkpọkọ ahụ na-arụ ọrụ dị ukwuu! M hụrụ n'anya retractable foset isi maka spraying sink bezin. Ntọala ahụ jiri uwe aka na-acha ọcha na-acha ọcha ọ bụ ezie na ejighị n'aka na ihe ndị ahụ bụ. Nkwakọ ngwaahịa ahụ dị mma nke ukwuu, enwere m obi ụtọ na ịzụrụ m!
Enweghị m atụ anya na ọkpọkọ mmiri na ọnụahịa a ga-adị mma. Ahụrụ m ụfọdụ ndị mkpesa banyere mmetụta plastik nke ihe ahụ. ihe a adighi enwe obi uto mana nke ahu bu ihe anyi nwere ike icho anya maka ahia na ego a. Ihe na-adị ka igwe anaghị agba nchara mana ọkụ karịa nke ahụ. Naanị oge nwere ike ịza ma ọ bụrụ na ọ dịgidere. Igwe mmiri ahụ nwere isi gbasaa dị ka ọtụtụ pọmpụ ndị ọzọ mana echere m na ha ejighi isi mmiri iji mee ka isi ya ghara ịlaghachi ngwa ngwa dị ka ndị ọzọ. Agbanyeghị, ọ ka na-arụ ọrụ ọfụma. Ngwaahịa rutere n'ọnọdụ zuru oke, nkwakọ ngwaahịa dị mma. Ukwuu nwere ike ikwu ma ọ bụrụ na ị na-achọ ihe oké ọnụ foset!
M nnọọ kwagara n'ime ụlọ ọhụrụ na ochie kichin sink bụ agadi na kpụchara akpụcha na nchara. Mgbe m sere ihe, etinyere m pọmpụ mmiri ọhụrụ a. Ọ na-enye ya ọhụụ nke oge a na m hụrụ onye na-azụ ala n'anya. Ọ dị mfe ịwụnye (naanị soro ntuziaka).
Ihe a niile na arụ ọrụ niile. Mara mma nke ukwuu. Ga site na ọkọlọtọ chrome ọkọlọtọ, aka abụọ, obere kichin kichin n'olu dị nso na-atọ ụtọ! Ọnụahịa bụ asọmpi. Mfe ịmegharị. Obi dị m ezigbo ụtọ na nzụta a.
mara mma, na-arụ ọrụ nke ọma
Dị nnọọ ụtọ
Na-arụ ọrụ dị ukwuu. Uru dị egwu maka ọnụahịa ahụ. Anọ m na-achọ ịgbanwe anyị foset ruo mgbe ebighị ebi na nke a na-arụ ọrụ ma na-ama mma. Sprayer anaghị egbu egbu. Naanị jide n'aka na ị ga-etinye ọkwa dị mma.
Pulu mmiri bụ ngwaahịa mara mma. Mfe ịwụnye ma ọ bụrụ na usoro nke sink gị dị mfe iji rụọ ọrụ. Maka m, ọ dị m mkpa ịdina ala iji wụnye ya. Ma ọ bara uru.
M ga-ekwu maka price m ejighị n'aka banyere ịzụta a ma m n'aka na obi dị m ụtọ na m mere ọ dị mfe iji wụnye ọrụ kpọmkwem dị ka na-atụ anya na dị nnọọ ka mma dị ka gị elu ọgwụgwụ fosets na m ga-asị m edela nlebara anya karia nihi na echefuru m ya mere oburu na m were oge iji dee ihe a, o putara na o ruru ya, achoro m ka ndi ozo na mmefu ego hu ya ka ighara imebi ulo oba mgbe ichoro ulo gi.
Ọnụahịa dị ukwuu maka ezigbo ọkpọkọ. Enwere m mmasị na njirimara "nkwụsịtụ" ahụ. Ọ dị nnọọ mfe ịwụnye. Nke a bụ eriri mmiri nke abụọ m nwetara n'ụlọ ọrụ a, ma ha abụọ mara mma!
Ezigbo foset maka ego. Mfe wụnye, achọghị plumbers tap, na ọ dịghị leaks. Anyị na-ele anya na-agagharị n'ime otu afọ na nke a bụ mmelite dị ọnụ ala maka kichin
M na-agụ nyocha ma were ohere ma ejiri m obi ụtọ na m mere, nke a bụ mmelite dị egwu maka kichin anyị na ọnụahịa a na-enweghị atụ ma e jiri ya tụnyere nnukwu ụlọ ahịa.
Maa ọmarịcha nzụta. Na-ele anya dị oke ọnụ, klas ma bulie kichin. Mgbatị ahụ dị ebube. Hụchaa n'isi. Mama m chọrọ nke a, ọ karịrị afọ ojuju.
Naanị ihe mmiri miri emi dị mkpa. Mfe iji wụnye naanị ngwaọrụ bụ ncha mgbanwe. Phillips ọkwọ ụgbọala. Hooked elu enweghị leaks na mbara na-enwe obi ụtọ.
Nke a na-eme ka pọpụlụ mmiri ahụ mee ka ndụ kichin dịghachi ndụ! Emere nke ọma ma dị mfe ịwụnye! Enweela m nkwụsị ma ọ bụ nsogbu dị ugbu a! Akwadoro m !
M hụrụ n'anya ọhụrụ m foset m zụtara 2 otu maka ụlọ m na otu maka ụlọ m nwere. Ha na-ele anya nke ọma ma na-arụ ọrụ dị egwu!
Mfe iji wụnye, gụnyere ihe niile ịchọrọ. Nnukwu uru maka ego ahụ, ekwela ka ọnụ ala dị ala mee ka ị ghara ịtụ ụjọ!
Anyị bụ ndị nkịtị na-enweghị mgbakwunye pipụ dị ka sistemụ mmiri - ọ bụ ntinye dị mfe. Enwekwara m shelf na ụzọ ka ibu ghara ịga ebe ọ bụ n'ezie jide n'aka na ị nọ n'okpuru mmiri gị doro anya na ọ ga-eme ka ọ dịrị ya mfe ịrụ ọrụ. Igwe mmiri na-adọrọ adọrọ ma mara mma nke ọma. M hụrụ ya n'anya nke ukwuu
Azụtara m pọmpụ mmiri a iji melite kichin m. M kwụrụ mmadụ ụgwọ ịwụnye m ya nke m nwere obi ụtọ na m mere. M na-azụ ahịa arounde. Mara mma foset.
WOWOW kacha mma kwatupu kichin friji na magnet ...
KPỌTỤRỤ ANYỊ ADD: 8 INWETA STE A, KENT, DOVER CITY, DE, 19901. USA TEL: (213) 290-1093 E-mail: sales@wowowfaucet.com
Copyright © 2020-2025 WOWOW FAUCET INC. Ikike niile echekwabara.